« Raharaha Ambohimahamasina » : mandainga ve izany ireo mpiasan’ny IGE ? (NewsMada) | AEMW
« Raharaha Ambohimahamasina » : mandainga ve izany ireo mpiasan’ny IGE ? (NewsMada)
Efa aty aoriana be, noho ny fielezan’ny vaovao hatrany ivelany amin’ny alalan’ny RFI sy ny TV 5 Monde, vao nitondra ny fanamarinan-tenany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Atitany. Nambarany fa tsy marina ary tsy mitombina ny fanodinkodinam-bola tany amin’ny kaominina Ambohimahamasina, Matsiatra Ambony niseho ny volana jona teo. Tsy mitombina anefa ny fiarovan-tenan’ny fanjakana manoloana izany. Efa nahazo ny tatitra rehetra momba azy io ny DG eo anivon’ny IGE sy ny primatiora ary koa ny eny anivon’ny fiadidiana ny Repoblika. Efa nahanjahanjan’ny haino aman-jery any ivelany koa ny fanodinkodinana niainga amin’iny fampiakarana « codis » ireo mpiasan’ny IGE telo iny. Nahoana no efa aty aorian’izany rehetra izany vao namaly sy niaro tena io tompon’andraikitra io ary nilaza fa tsy marina sy tsy mitombina ny tatitr’ireo mpiasan’ny IGE ? Tsy mazava. Mandainga izany ireo mpiasan’ny IGE nanao ny fanaraha-maso ny vola ? … « Nanao tatitra izy ireo. Niantso ny praiminisitra tamin’izany ary nahazo io tatitra io ihany. Ny ampitson’io, nesorina tamin’ny toerany ity praiminisitra ity… Manelingelina azy ireo izany rehetra izany satria nahita ny volam-bahoaka nalefa any amin’ny tsy izy ireo mpiasan’ny IGE ireto », hoy ireo mpisolovava ny mpiasa, ny 9 aogositra teo tetsy Anosy.
Ho kandidà amin’ny fifidianana
Notsiahivin’izy ireo fa nahazo fahazoan-dalana hamita iraka (OM), hanara-maso ny volan’Ambohimahamasina ireo mpiasan’ny IGE. « Nahita ny tsy mety izy ireo satria vola miditra androany amin’ny kaominina, ny ampitso anefa nafindra any amin’ny kaontin’olon-kafa. Tena nanao ny asany izy ireo ary nosoratana nanaovana tatitra mihitsy izany…», hoy ihany ireo mpisolovava.
Mety mitombina izany, hatreto, fa misy tetika manoloana ity fifampiarovana, hikendrena ny hanolorana ho kandidà amin’ny fifidianana io tompon’andraikitra iray io, avy amin’ny alalan’ny fiombonambe misy azy ?
Etsy andaniny anefa, tsy mifankahazo amin’ny vadin’ny tompon’andraikitra ambony iray izy io… Misy ny olana ? Andrasana ny hambaran’ny Praiminisitra Mahafaly momba ireo rehetra ireo.
@dmin August 22, 2016 NewsMada No Comments
← Andalatanosy : taksiborosy notafihin’ny dahalo (NewsMada)
Halatra avolenta : 500 tapitrisa Ar ny iray kilaon’ny lakolosy, 2 hetsy Ar ny baiboly (NewsMada) →